Abicah camera amalaphu ababoneleli kunye neefektri - China abicah camera amalaphu abavelisi
I-Changzhou Jiashun New Material Technology Co, Ltd. eyasekwa ngo-2015, ngumvelisi ogxile kwimveliso kunye nokuthengiswa kweemveliso zeglasi yefayibha. Ime e-Changzhou, ikomkhulu lakudala le-China, kumazantsi oMlambo i-Yangtze kunye nonxweme lwe-Taihu Lake, embindini we-Yangtze River Delta. Iyalingana ukusuka eShanghai naseNanjing. Kufutshane nohola wendlela kazwelonke i-312 kunye nomgaqo wendlela yomlambo, ngokuhamba okufanelekileyo.
I-silicone tape, ekwabizwa ngokuba yi-sandwich gel silica, yenziwe nge-silica gel kwilaphu yeglasi yefayibha ngobushushu obuphezulu, kunye ne-asidi kunye ne-alkali ukumelana, ukunxiba ukumelana, ukuphakama okuphezulu kunye nokushisa okuphantsi kunye nokumelana nokubola. Ilaphu le-silica gel likwahlulwe layixube ye-silica gel kunye ne-silica gel, ekwahlulahlulwe ibe ngamacandelo amabini e-silicone yamacala amathandathu kunye ne-silicone yamacala amabini
Ilaphu elicwecwe ngelaphu
I-silicone tape, ekwabizwa ngokuba yi-sandwich gel silica, yenziwe nge-silica gel kwilaphu yeglasi yefayibha ngobushushu obuphezulu, kunye ne-asidi kunye ne-alkali ukumelana, ukunxiba ukumelana, ukuphakama okuphezulu kunye nokushisa okuphantsi kunye nokumelana nokubola. Ilaphu le-silica gel linokwahlulwa libe yi-silica gel kunye ne-silica gel engamanzi, enokwahlulwa ibe lilaphu le-silica elinamacala amabini kunye nelaphu le-silica elinamacala amabini